Soo Iibso Cotton Cufan oo Isku Xidhan Grid Toos ah oo Slim Fit Ragga Ganacsi - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Style: Casriga fudud
Xusuusin: Kani waa Cabbirka Aasiya, wuu ka yar yahay cabirka EU / US, fadlan si taxaddar leh u fiiri shaxda cabbirka! Sida lagu cabbiro gacanta, 1-3 cm kala duwanaansho ayaa loo oggol yahay (1cm = 0.39inch). Kombuyuutarka kala duwan wuxuu soo bandhigi karaa midabbo kala duwan xitaa haddii uu isku midab yahay. Fadlan u oggolow midab macquul ah oo midab leh.
ninkaygu wuxuu la egyahay xajmiga 32 laakiin cabirka 33 ayaa sifiican uqaban doona
waxay ku habboon tahay weyn, xoogaa gaaban lugta laakiin taasi waxaa laga filayaa noocyada noocan ah surwaal.
Nice .. Wuxuu qaatay 31